शब्दकोश.com को लागी एक फेसलिफ्ट Martech Zone
शब्दकोश..com को लागी एक फेसलिफ्ट
बुधवार, अगस्त 23, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म एक उत्सुक पाठक हुँ, तर हिज्जे, विराम चिह्न र व्याकरणको साथ भयानक छ। म शब्दको अर्थ के हो भनेर पत्ता लगाउन नसक्दा म शब्दकोषमा जाँदछु। आज जब म पढ्छु चिपको क्विप on पूर्ण स्नार्क्स आज मलाई थाहा थिएन कि उनले हेक के कुरा गरिरहेको थियो। त्यसोभए, म शब्दकोष। Com मा गएँ र तिनीहरू एक अनुहार भयो। राम्रो देखिन्छ तर मलाई लाग्छ कि तिनीहरूले मबाट रंगहरू चोरी गरे, यद्यपि। (जिस्केकाे)
र म अझै पनि बुझ्न सक्दिनँ कि एक पूर्ण स्नार्क के हो। मलाई विकिपीडियामा जानुहोस्, एक स्नार्क पनि हेर्न। (सङ्केत: स्लाइड+टिप्पणी)। मलाई लाग्दछ कि यो गूँगा जब यो हास्यास्पद छैन।
तर हे, SnakesaPlएनी राम्रो देखिन्छ, हँ?
उपभोक्ताहरू पछाडि लडाई!
समूहले अनलाइन भिडियो बजार लिन सक्दछ?
अगस्ट,, २०१ 23 2006:२१ अपराह्न
हे डग, मेरो मतलब यो "धेरै" को पर्यायवाची हो, तर "प्लेन" को जस्तो आवाजको लागि। स pun्केतको साथ संकेत / ध्वनि अनुपातमा थोरै कम, म अनुमान गर्दछु।
[म हाँस्दै छु] नह, चिप - म पनि हास्यास्पद हुन खोज्दै थिएँ। कमसेकम मलाई थाहा छ अब पूर्णताको के अर्थ हो!